RASMI: Xulka qaranka Brazil oo ku guuleystay Copa América 2019… + SAWIRRO – Gool FM
RASMI: Xulka qaranka Brazil oo ku guuleystay Copa América 2019… + SAWIRRO
Haaruun July 7, 2019
(Brazil) 07 Luulyo 2019. Xulka qaranka Brazil ayaa ku guuleystay tartanka Copa América 2019, kaddib markii ay 3-1 uga adkaadeen dhiggooda Peru kulankii Final-ka ahaa ee ka dhacay garoonka Maracanã.
Kulankan waxaa goolka la horreeyey xulka Brazil, waxaana goolka hore u daah furay 15’daqiiqo ciyaaryahan Everton, kaddib caawin uu ka helay Gabriel Jesus, Peru ayaana lagu hoggaamiyey 1-0.
Peru ayaa iska soo guday goolkaas 44’daqiiqo waxaana rigoore loo dhigay gool u rogay ciyaaryahan Jose Paolo Guerrero, kaasoo kulanka ka dhigay gar isku mid ah 1-1, waxaana goolkaasi uu ka dhignaa goolkii ugu horreeyey ee tartankan laga dhaliyo Brazil.
Inta aan la’ aadin qeybta nasashada xulka Brazil ayaa markale hoggaanka ciyaarta la wareegay waxaana u dhaliyey caawiyaha goolkoodii koowaad ee Gabriel Jesus, ciyaarta ayaana lagu kala nastay 2-1 looga gacan sarreeyey Peru.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay, waxaa xulka Brazil kaarka cas ka qaatay 70’daqiiqo Gabriel Jesus, taasoo ka dhigan inuu kulankan gool dhaliyey mid kalena caawiyey isla markaana garoonka laga saaray.
Laakiin dhammaadkii ciyaarta xulka Brazil ayaa natiijada ciyaarta dhinac u rogay kaddib markii ay la yimaadeen goolka saddexaad ee kulankan, waxaana rigoore lagu abaal-mariyey gool u rogay Richarlison ciyaarta ayaana ku soo dhammaatay 3-1 ay ku adkaadeen Selecao.
Marti-geliyeyaasha tartankan ee Brazil ayaa markoodii ugu horreysay ku guuleystay Copa América tan iyo sanadkii 2007, si kale haddii aan u dhignana xulka Brazil ayaa caawa qaaday Copa América tan iyo sanadkii 2007.
Xulka Brazil ayaa koobkaan oo horay loo oran jiray South American Championship haddana la yiraahdo Copa América caawa ku guuleystay markoodii sagaalaad.
Xulka Algeria oo iska xaadiriyay siddeed dhammaadka koobka qarammada Afrika, kaddib markii ay xasuuqeen Guinea … + SAWIRRO
Wareegga 16-ka Koobka Qarammada Qaaradda Afrika oo caawa la soo gabagabaynayo, Kulamada la ciyaari doono & Saacadaha ay soo galayaan